Somalikudhan.com warar xaqiiq ah – Skinny Fiber – What You May Want To Know Beforehand
Somalikudhan.com warar xaqiiq ah
Leave a comment on Somalikudhan.com warar xaqiiq ah
Shir lagu dhiiri gelinaayo Nabadda iyo Dib u heshiisiinTa Soomaaliyeed oo Lagu qabtay altowba fast food ee Magaalda Muqdisho lagana soo saaray warmurtiyadeed iyo qodobo dhowr ah
shirkaan oo ay ka so qeyb galeen qeybaha kala duwan ee bulsho weynta somaliyeed oo ay matalayeen dad caan ku ah bulshada dhaxdeed oo ay mid ahaayeen Sh: Maxamuud ow Cabdulle Cariif ,
Xusen Xaji Bood ,Cabdulaahi calas jimcaale , Caasha cusman Ugaas ,Jamiilo Xeyle ayaa si hufan looga hadlay arimaha siyaasada ,dhaqaalaha ,nabad galyada , sicir bararka , waxaana lagu taageeray howlaha shirka dib u heshiisiinta ee ka socoto cariga jabuuti guntii iyo gabagabadii ayaa qoraal dheer oo uu aqriyey Cdulaahi Clas Jmcaale waxaa uu u qoraa sidaan.
xubnihii kasoo qayb galay shirka
Maanta oo taariikhdu tahay 14-ka May 2008-da,Muqdisho waxaa shir isugu yimid qeybo ka tirsan Jilayaasha aan Dowliga ahayn sida Culumaa’udiinka, Ururada Bulshada Rayidka, odayaasha Dhaqanka, Haweenka, Ganacsatada, Aqoonyahanka, dhalinyarada iyo Siyaasiyiinta, kuwaasoo iyaga oo maanka ku haya dhibaatada baaxada leh ee dalka ka jirta waxey si diiran u soo dhaweeyeen shirka dib u heshiisiinta dhawaan ugu bilaabmay magaalada Jabuuti Ergooyin ka kala socda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Isbahaysiga dib u xoraynta Soomaliyeed.
Shirkii Maanta oo ay haween kasoo qayb galeen
Ka qeybgalayaasha shirkaani ayaa xasuusinaaya ergooyinka labada Dhinac ee wadahadalku ugu bilaabmay magaalo madaxda Jabuuti arrimaha hoos ku qoran:
Soomaaliya waxey ku sugan tahay xaalado aad khatar u ahoo isugu jira xadgudubyo lid ku ah xuquuqda Aadanaha , faqri baahsan, waxbarasho La’aa, colaado, caafimaad daro, abaaro, sicir barar iyo xasilooni darro siyasadeed.
Malyan iyo bar dad ah ayaa macluul qarka u saran oo u baahan gurmad deg deg ah iyo in dib loogu celiyo guryahooda.
Dhamaan dacalada aduunka ayay Soomaalidu ku dhibaataysan tahay Miciin la’aan.
Ka qeybgalayaasha shirkaani waxey soo jeedinaayaan Tilaabooyinka hoos ku qoranin lagu daro heshiiska shirka dib u heshiisiinta ka soo bixi doona.
1. In la joojiyo dagaalada laguna dhawaaqo xabad joojin deg deg ah si loo badbaadiyo hambada Shacabka Soomaaliyeed.
2. In aan wax shuruud ah lagu xirin wadahadalka u dhaxeeya Soomaalida.
3. in lagu heshiiyo hanaan Siyaasadeed, Nabadgelyo iyo dib u heshiisiin oo dalka ka gudbinaaya colaada iyo kala dambeyn la’aanta.
4. in lagu heshiiyo sidii ciidamada Itoobiya uga bixi lahaayeen loona qabto waqti cayiman.
5. Gargaar deg deg ah oo wax ku ool ah in loo fidiyo dadka barakacay iyo qaxootiga Soomaaliyeed ee dunida ku dhibaataysan.
6. In laga faa’iideysto fursadaha dib u heshiisiinayd ee caalamka ku garab istaagayo Soomaaliya.
7. In dib u heshiisiinta sal looga dhigo danaha Ummadda Soomaaliyeed.
8. in Bushada caalamka iyo Gobolkuba ay mideeyaan fikirkooda dib u heshiisiinta soomaaliya.
9. Qurba jooga Soomaaliyeed waxaa laga codsanayaa inay taageeradooda iyo fikirkooda ku biiriyaan Shirkaan.
10. waxaa UN-ka looga baahan yahay inay dowladaha danaha ka leh Soomaaliya inay ku cadaadiyaan inay qeyb wax ku ool ah ka qaataan db u heshiisiinta Soomaaliyeed.
11. Dadka Soomaaliyeed xiligaan wixii ka dambeeya ma ogolaan karaan indhiigooda lagu gor gortamo.
Dadweynaha Soomaaliyeed waxaa loogu baaqayaa in ay soomaan maalinta Khamiista ah, salaada Jimcahana dadka Soomaaliyeed looga duceeyo in Ilaahey ka dulqaado abaaraha Iyo colaadaha.
Xafiiska warqabaka ee magaalada Nairobi
Natiijada ciyaarihii xalay dhacay euro 2012 england vs france iyo ukraine vs sweden. | www.somalifootball.com